Ahoana ny fomba hijerena mora foana, hanaraha-maso ary hanamboarana rohy tapaka ao amin'ny WordPress | Martech Zone
Ahoana ny fomba hijerena mora foana, hanaraha-maso ary hanamboarana rohy tapaka ao amin'ny WordPress
Talata, Febroary 9, 2021 Alarobia, Febroary 24, 2021 Douglas Karr
Martech Zone dia nandalo famerenana matetika hatramin'ny nanombohany ny taona 2005. Nanova ny sehatray izahay, namindra ny tranokala ho mpampiantrano vaovao, ary nasiana marika imbetsaka.
Misy lahatsoratra 5,000 mahery izao miaraka amin'ny fanehoan-kevitra efa ho 10,000 ao amin'ilay tranonkala. Ny fitazonana ny tranokala ho salama ho an'ny mpitsidika anay sy ny motera fikarohana amin'izany fotoana izany no tena olana. Iray amin'ireo fanamby ireo ny fanaraha-maso sy fanitsiana rohy tapaka.
Rohy tsy mandeha mahatsiravina - tsy avy amin'ny zavatra niainan'ny mpitsidika fotsiny sy ny fahasosorana tsy nahita ny fampitam-baovao, afaka nilalao ilay horonantsary, na natolotra tamin'ny pejy 404 na domain maty… fa ratsy ihany koa ny taratry ny tranokalanao amin'ny ankapobeny ary mety handratra ny fikarohana nataonao fahefana maotera.
Ahoana ny fanangonan'ny tranokalanao rohy tapaka
Ny fahazoana rohy tapaka dia mahazatra eo amin'ny tranonkala. Misy fomba iray taonina mety hitrangan'izany - ary tokony harahi-maso sy ahitsy daholo izy rehetra:
Mifindra monina amin'ny sehatra vaovao - Raha mifindra amin'ny sehatra vaovao ianao ary tsy mametraka tsara ny fanodinanao dia mety tsy hahomby ireo rohy taloha ao amin'ny pejinao sy ny lahatsoratrao.
Fanavaozana ny firafitry ny permalink anao - Rehefa namoaka ny tranokalako tany am-boalohany aho dia nampiditra ny taona, volana ary daty tao amin'ny URL anay. Nesoriko izany satria daty misy ny atiny ary mety nisy fiantraikany ratsy tamin'ny filaharana an'ireo pejy ireo satria ny motera fikarohana matetika dia mihevitra ny firafitry ny lahatahiry ho maha-zava-dehibe ny lahatsoratra iray.
Tranonkala ivelany lany andro na tsy mamily lalana - Satria manoratra momba ny fitaovana ivelany aho ary mikaroka iray taonina, misy ny loza mety hitrangan'ireo orinasa ireo, azo, na mety hanova ny firafitry ny tranony manokana nefa tsy mamily ny rohy.
Nesorina ny haino aman-jery - Ny rohy mankamin'ny loharanom-baovao izay mety tsy misy intsony dia mamokatra banga amin'ny pejy na horonan-tsary maty izay nampidiriko tao amin'ny pejy sy lahatsoratra.
Rohy fanehoan-kevitra - manjaka ny fanehoan-kevitra avy amin'ny bilaogy manokana sy serivisy tsy misy intsony.
Na dia manana crawler mamantatra ireo olana ireo amin'ny tranokala aza ireo fitaovam-pikarohana, dia tsy nanamora ny famantarana ny rohy na ny haino aman-jery diso izany ary miditra sy manamboatra azy. Ny fitaovana sasany dia manao asa mahatsiravina amin'ny fanarahana fanovana ihany koa.
Soa ihany, ireo olona tao WPMU ary Mitantana WP - orinasam-panohanana WordPress roa tsy mampino - namolavola plugin WordPress maimaimpoana maimaimpoana izay miasa tsy misy hatak'andro mba hampandrenesana anao ary hanome anao fitaovana fitantanana hanavao ireo rohy sy haino aman-jery tapaka.
The Plugin plugin Broken Link Checker dia mandroso tsara ary mora ampiasaina, manamarina ny rohy anatiny, ivelany, ary ny haino aman-jery nefa tsy dia be mpiorina (izay tena zava-dehibe). Misy safidy an-taonina maro izay afaka manampy anao koa - manomboka isaky ny tokony ho izy ireo no manamarina, impiry hanamarina ny rohy tsirairay, inona ny karazana haino aman-jery hijerena, ary na iza aza no tokony hampandrenesina.
Azonao atao koa ny mifandray amin'ny Youtube API hanamarinana ireo playlist sy horonan-tsary Youtube. Ity dia endri-javatra tsy manam-paharoa izay tsy tadiavin'ny ankamaroan'ny mpikaroka.
Ny valiny dia dashboard mora ampiasaina amin'ny rohy rehetra, rohy tapaka, rohy misy fampitandremana ary fanodinana. Manome anao fampahalalana mihitsy aza ny dashboard raha pejy, lahatsoratra, fanehoan-kevitra, na karazana atiny hafa ampidirina ao anaty rohy. Ny tsara indrindra dia azonao atao ny manamboatra ny rohy avy hatrany!
Ity dia plugin miavaka ary tsy maintsy ananana amin'ny tranokala WordPress rehetra izay te-hanome traikefa ho an'ny mpampiasa ambony ary hanatsara ny tranonkalany ho an'ny valin'ny fikarohana farany ambony. Noho io antony io dia nampidinay tao amin'ny lisitry ny plugins WordPress tsara indrindra!
WordPress Broken Link Checker Plugins WordPress tsara indrindra ho an'ny orinasa
Tags: tsara indrindra WordPress Pluginsfanairana rohy tapakaraki-bolanajereo ny rohy tapakarohy tsy mandeharohymitantana rohy tapakaaraho maso ireo rohy tapakampanamarina horonantsaryWordPressmpanamarina rohy tapaka wordpressplugin WordPresswpmanagewpmuFanamarinana YouTubeYouTube Video
Mila fanampiana amin'ny marketing ho an'ny mpihaino teknika? Atombohy Eto
Ny torolàlana farany hananganana ny profil LinkedIn tonga lafatra